कोरोना भाइरसबारे चिन्ता कति आवश्यक? १५ प्रश्नोत्तर - चौतारीपोष्ट अनलाईन
कोरोना भाइरसबारे चिन्ता कति आवश्यक? १५ प्रश्नोत्तर
एजेन्सी– अहिले करीब १५ हजार मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व संकटकालको घोषणा गरिसकेको छ।
कोरोना भाइरसका कारण चीनमा ३ सय ५० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यो भाइरस चीनको वुहान शहरमा गत डिसेम्बरमा देखिएको थियो।
विज्ञहरुका अनुसार यसबाट संक्रमित हुनेको संख्यामा अझै वृद्धि हुँदै जानेछ।
नोवेल कोरोना भाइरस अहिले विश्वभरि नै सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ।
चीनबाट फैलन सुरु गरेको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी भइरहेको छ। यसअघि यस्तै अन्य ६ वटामात्र भाइरसहरूको समूहबाट हुने संक्रमण बुझिन्थ्यो भने अहिले देखा परेको भाइरस नयाँ प्रकारको भएको बताइएको छ।
सिभियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स)‚ जुन भाइरसका कारण सन् २००१ मा ७ सय ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८ हजार ९८ जना यसबाट संक्रमित भएका थिए।
‘सार्सले एकदमै बलियो छाप छोडेर गएको छ‚ जहाँबाट धेरै डर पैदा हुन्छ। त्यसबाट हामीले कसरी यसको तयारी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा धेरै कुरा सिकेका छौं‚’ वेलकम ट्रस्ट सम्बद्ध डाक्टर जोसी गोल्डिङ् भन्छन्।
के हुन् यसका लक्षणहरु?
सुरुमा ज्वरो आउने‚ सुक्खा खोकी लाग्ने‚ यस्तो भएको करीब एक सातापछि पूरा सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखियो भने कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।
पाँचमध्ये एउटा केस चाहीं खतरनाक मानिन्छ।
प्रत्यक्ष रुपमा देखिने लक्षणमा नाकबाट पानीजस्तो पदार्थ लगातार बगिरहनु र हाच्छ्यूँ लाग्नु पनि हो। कोरोना भाइरसको एउटा परिवार नै छ‚ जसमध्ये केही कोरोनाले सामान्यमात्र असर गर्छन् भने केही कोरोना भाइरस ज्यानै समेत लिन किसिमका हुन्छन्।
‘हामीले नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको बारेमा जान्नुपर्दा‚ पहिला त त्यसका लक्षणहरू कत्तिको खतरनाक छन् भन्ने विषयमा जान्न चाहन्छौं। तर‚ यो भाइरसको लक्षण भने जाडोमा देखिने सामान्य रुघा खोकीका लक्षणभन्दा अलिक जटिल नै देखिन्छ। तर‚ यो नोवेल कोरोना भाइरस सार्सभन्दा खतरनाक भने होइन’ एडिनवर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मार्क वुलहाउसले भने।
यो भाइरस कत्तिको मृत्युकारक?
सामान्यतः अहिले कति जना यसबाट संक्रमित छन् र दैनिक कत्तिको हाराहारीमा मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने आँकलबाट कुन केस कत्तिको खतरनाक भन्ने विषयमा अनुमान लगाउन सकिन्छ।
अहिलेको नोवेल कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमित बिरामीमध्ये करीब २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र मृत्यु भएको पाइएको छ। हजारौं कोरोना संक्रमित बिरामीहरू अझैपनि अस्पतालमा उपचाररत छन्।
र यसबाट अझै कतिजनाको मृत्यु हुने हो यसबारेमा ठ्याक्के भन्न सकिने स्थिती छैन। त्यसैले विश्वस्तरमा नै यो भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
कहाँबाट सुरु भयो यो भाइरस?
नयाँ भाइरसहरू जुनसुकै बेला पनि मानिस अथवा पशुमा देखिन सक्छन्।
भाइरसहरु आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरेर नजानिँदो तवरले मानव शरीमा प्रवेश गर्छन्।
‘यदि हामीले विगतलाई केलाउने हो भने‚ अन्य झैं यो नोवेल कोरोना भाइरस पनि जनावरबाट नै आएको हुनसक्छ‚’ युनिभर्सिटी अफ नोटिङ्गमका भाइरोलोजिस्ट प्रोफेसर जोनाथन बलले जानकारी दिए।
अहिले दक्षिणी चीनको वुहान प्रान्तमा रहेको ‘सिफूड होलसेल मार्केट’बाट पनि यो भाइरसको संक्रमण सुरु भएको आंकलन गरिएको छ। तर‚ भरखरैमात्र गरिएको एक अध्ययनले गत डिसेम्बरमा कोरोना संक्रमित एक बिरामीलाई सोधपुछ गर्दा यो रोगको उक्त मार्केटसँग कुनै सम्बन्ध रहेको भने देखिँदैन। सार्स भाइरसको संक्रमण सुरुमा सिवेट नामक बिरालोमा देखिएको थियो। पछि यही भाइरस मानिसमा सरेको भनी पुष्टी भएको थियो।
मिडल इस्ट रेस्परेटोरी सिन्ड्रोम (मेर्स)‚ जसले सन् २०१२ मा करीब ८ सय ५८ जनाको ज्यान लिएको थियो भने २ हजार ४ सय ९४ जनामा यसको संक्रमण फैलिएको थियो। सो समयमा उक्त भाइरस ड्रोमेडरी ऊँटबाट मानिसमा सरेको थियो।
यदि कुनै जनावरमा नोवेल कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन सकियो भने यो भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिन धेरै सजिलो हुने कुरा विज्ञहरू बताउँछन्। समुद्रमा जाने स्तनधारी जनावरहरूबाट कोरोना भाइरस मानिसमा सरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
साउथ चाइना सिफूड होलसेल मार्केटमा कुखुरा‚ चमेरा‚ मुसा‚ सर्पहरू ज्युँदै पनि बेच्ने गरिन्छ। जसबाट नोवेल कोरोना भाइरस सरेको हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी सम्भावना चमेरोको हर्ससू ब्याट्स् नामक चमेरोको एक प्रजातीबाट सरेको हुनसक्नेमा रहेको जनाइएको छ।
यही चमेरो नै महामारीको मूख्य कारण हो भन्ने बारेमा भने अझै पुष्टी भइनसकेको बताइएको छ।
प्रोफेसर उलहाउसका अनुसार चीनमा जनसंख्याको आकार र जनघजत्व बढी भएको र धेरै मानिसहरुको र जनावरहरूको सम्पर्कका कारण चीनमा नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हो।
कति सहजै यो भाइरस मानिसमा फैलन्छ?
नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु हुँदा चिनिया अधिकारीले उक्त भाइरसको संक्रमण कतै नफैलिएको बताएका थिए।
एक अध्ययनअनुसार वैज्ञानिकहरूले हरेक संक्रमित व्यक्तिबाट अरु २ देखि ३ जनामा सर्ने गरेको बताएका छन्।
मानिसहरू कहिले यसबाट संक्रमित हुन्छन्?
चिनिया वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसहरु यसको लक्षण देखिनुभन्दा अगावै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका हुन्छन्।
नोवेल कोरोनाबाट संक्रमित भएको समयभन्दा करीब २ सातापछि यसका लक्षण देखिन थाल्छन्।
सार्स र इबोला भाइरसबाट व्यक्ति संक्रमित हुनासाथ मानिसमा तिनका लक्षणहरू देखापर्न थाल्छन् भने कोरोना भाइरस संक्रमित भएका व्यक्तिमा केही समयपछि मात्र यसका लक्षणहरु देखिन सुरु गर्छन्।
बिरामी व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर छुट्टै स्थानमा राखेर उपचार गर्नु नै यसलाई नियन्त्रण गर्ने अहिलेको प्रमुख उपाय हो।
लण्डनस्थित इम्पेरियल कलेजमा सांक्रामक रोग विभागकी प्रोफेसर वेन्डी बार्क्लेका अनुसार कोरोनाले फोक्सोको संक्रमण गराउँछ र लक्षणबिना नै यो अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्छ।
‘सामान्य रुपमा सास लिइरहेको मानिसमा पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ। संक्रमित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा पनि भाइरस सर्न सक्छ‚’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार यो भाइरस स्वाइन फ्लूजस्तो विश्वव्यापी भइसकेको छैन। यस्ता लक्षणबिनाका संक्रमणलाई रोक्न भने चीनलाई कठिन नै पर्नेछ।
कति छिटो फैलन्छ त कोरोना?
यसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। ‘यूरोपियन सेन्टर फर् डिजिज् प्रिभेन्सन यान्ड कन्ट्रोल’ ले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कमा चीनबाहेकका २४ देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखाइएको छ।
जापानमा २०‚ थाइल्याण्डमा १९‚ सिङ्गापुरमा १८‚ अस्ट्रेलियामा १२‚ ताइवानमा ११‚ मलेसियामा ८‚ दक्षिण कोरियामा १५‚ फ्रान्समा ६‚ अमेरिकामा ११‚ जर्मनीमा १०‚ भियतनाममा ८‚ युएईमा ५‚ क्यानडामा ४‚ इटलीमा २‚ रसियामा २‚ बेलायतमा २‚ कम्बोडियामा १‚ फिनल्याण्डमा १‚ भारतमा २‚ नेपालमा १‚ फिलिपिन्समा २ र श्रीलङ्कामा १‚ स्पेनमा १ र स्वेडेनमा१ जना संक्रमित भएका छन्।
युनिभर्सिटी अफ हङ्कङले भने सार्वजनिक गरिएको भन्दा धेरै संख्यामा संक्रमित भएको दाबी गरेको छ।
किन गरियो विश्व संकटकाल घोषणा?
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस पनि इबोला र स्वाइन फ्लूजस्तै भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्‍यो।
गरीबीको रेखामुनी रहेका देशहरूलाई मध्यनजर गर्दै संकटकाल घोषणा गरेको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले उनीहरूले यस्तो प्रकारको संक्रमणको सामना गर्न नसक्ने भएकाले संकटकाल घोषणा गरिएको बताएको छ।
भाइरसले आफ्नो रुप बदल्न सक्छ?
जुनसुकै बेला पनि भाइरसले आफ्नो रुप बदल्छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार कोरोना भाइरसमा संक्रमण गराउने क्षमता अझ बलियो भएको छ।
तर‚ कोरोना भाइरसको परिवर्तनबाट कस्तो अवस्था आइपर्छ भन्नेबारेमा भने अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन। यसलाई वैज्ञानिकहरूले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन्।
महामारी कसरी रोक्न सकिन्छ?
भाइरस कहिले पनि निर्मूल हुन सकिँदैन त्यसैले चीनले मात्र यो महामारीको अन्त्यका लागि केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास आम जनमानसमा छ। सार्स भाइरसको औषधि पनि चीनले नै पत्ता लगाएको थियो।
संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्न नदिनु नै यसको नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो उपाय हो।
• मानिसहरूको जमघटमा कमी ल्याउने।
• हात धुन र यसबाट बँच्ने अन्य उपायका बारेमा जनचेतना फैलाउने।
• सुरक्षित ड्रेसका साथ डाक्टरहरूले संक्रमित बिरामीलाई छुट्टै स्थानमा राखी उपचार गर्ने।
मूख्यतः यस भाइरसबाट संक्रमित बिरामीलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्नु नै हो।
यसको उपचार सम्भव छ?
यो भाइरसलाई रोक्नका लागि विभिन्न खोपहरूको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानबाट मेर्स भाइरसलाई रोक्न सक्ने खोपको विकास भयो भने कोरोनाको लागि पनि खोप पत्ता लगाउन सजिलो हुने अनुसन्धाताहरू बताउँछन्।
अस्पतालहरूले एन्टी-भाइरल औषधिको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
सार्स भाइरसका कारण देखापरेको महामारीका अन्त्यका लागि चीनले दुईवटा औषधि – लोपिनाविर र रिटोनाविरको सम्मिश्रणबाट एन्टी-भाइरल ड्रग्स पत्ता लगाएको थियो। जसबाट सार्स भाइरस नियन्त्रण भएको थियो।
बिरामीहरुलाई अलग ठाउँमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ जसका कारण भाइरस अरुमा सर्न पाउँदैन। श्वास प्रश्वासको लागि सहज वातावरण पैदा गर्नुपर्छ।
चीनले यसलाई कसरी सामना गरिरहेको छ?
चीनले यसको नियन्त्रणका लागि सकेसम्म गरिरहेको छ। बिरामीलाई छुट्टै स्थानको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर संक्रमित क्षेत्रमा यातायातदेखि तथा सबै उडानहरू बन्द गराएर यसको नियन्त्रणका लागि अभूतपूर्व कार्यहरू गरिरहेको छ।
मानिसहरूको जमघटलाई रोक्ने‚ द ग्रेट वालजस्ता पर्यटन आउने क्षेत्रहरू पर्यटकहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने‚ जनावरको मासु बेच्नमा रोक लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू गरिरहेको छ।
चिनको वुहान शहरमा २ हजार तीन सय बिरामी अट्ने दुईवटा नयाँ अस्पतालहरूको निर्माण भइरहेको छ।
विज्ञहरू यसलाई लिएर कत्तिको चिन्तामा छन्?
डाक्टर गोल्डिङ्स भन्छन्‚ ‘यसको बारेमा अझ धेरै जानकारी प्राप्त नगरेसम्म हामी कत्तिको चिन्तित हुनुपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुँदैन।
‘यदि कुनै मानिसहरूमा पहिलो पटक नयाँ भाइरस देखापर्छ भने त्यो विषयमा चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। किनकी यसले जस्तोसुकै अवस्था पनि ल्याउन सक्छ।’ प्रोफेसर बल भन्छन्‚ ‘यदि एकपटक यस्ता भाइरसहरू (मानव) कोषमा प्रवेश गरे भने यिनीहरूले आफूजस्तै अरू भाइरसहरु पनि पैदा गर्छन्। र आफ्नो रुप परिवर्तन गरेर झन् खतरनाक रुप लिन सक्छन्।’
यसको रोकथामका लागि एन्टी-भाइरल खोपको विकास सम्भव छ?
अहिलेको समयमा यसको रोकथामका लागि कुनैपनि खोपको आविष्कार भएको छैन‚ जसले हामीलाई यसको संक्रमणबाट बचाउँन सकोस्।
तर‚ वैज्ञानिकहरू यसलाई रोक्नका लागि खोपको विकास गर्न लागि परिरहेका छन्।
यो नयाँ प्रकारको भाइरस भएकाले योभन्दा अघि सो भाइरस मानिसमा देखिएको थिएन। त्यसैले यसको बारेमा डाक्टरहरूले अझ बढी सिक्नुपर्ने भएको छ।
-भावानुवाद : प्रदीप खद्योत/swsthyakhabarpatrika
Prevयी हुन् नेपालीलाई सबैभन्दा बढी लाग्ने १० क्यान्सर
Nextबाठो राजनीतिक प्रतिक्रियावाद